Imigaqo kunye neemeko-GBL Yurophu BV
Ngokuthenga kunye nokuvuma ii-therms zethu kunye neemeko kwivenkile yethu siyakuqinisekisa ukuba i-y-butyrolactone esiyifumana kwi-GBL Europe BV ayisetyenziselwa ukuvelisa okanye ukwenza izixhobo zekhemikhali, izixhobo okanye izixhobo ezingekho mthethweni zamachiza e-narcotic okanye izinto zengqondo. Umthengi uya kusebenzisa imveliso ngokukodwa ekucoceni okanye ekunyibilikeni. Umthengi uyavuma ukuba iimveliso aziyi kuthengiswa kwakhona okanye zithunyelwe ngaphandle ngqo okanye ngokungathanga ngqo ngabo.
I-GBL Yurophu BV Imigaqo kunye neemeko
Ezi ziVenkile zethu zeeVenkile yeeMeko kunye neMeko. Le Migaqo neMiGangango ngokuBanzi ihlala isebenza xa usebenzisa iwebhusayithi yethu okanye ubeka iodolo kwiWebhusayithi yethu, kwaye iqulethe ulwazi olubalulekileyo kuwe njengomthengi. Nceda ufundisise. Sikwacebisa ukuba ugcine okanye uprinte le miGaqo kunye neMeko ngokubanzi ukuze ukwazi ukubonisana nabo kamva.
I-GBL i-Europe BV: isekwe eNetherlands kwaye ibhaliswe kwiChamber of Commerce phantsi kwenombolo yefayile 71008470, yokuthengisa njenge-GBL Yurophu.
Indawo yeWebhusayithi: Ivenkile yeWebhu / yewebhu ye-GBL yaseYurophu BV, ukuba ifumaneke kwi-https: // cleanandsolve.com htttps: //gbl-europe.com nazo zonke iziqendu zayo.
Umthengi: umntu wendalo okanye iqumrhu elibambela ekusebenzeni komsebenzi okanye kwishishini elingena kwisivumelwano ne-GBL Europe BV kunye / okanye libhalisiwe kwiWebhusayithi.
Isivumelwano: naluphi na ulungiselelo okanye isivumelwano phakathi kwe-GBL YaseYurophu BV kunye noMthengi apho iMigaqo neMiGangatho ngokubanzi iyinxalenye ebalulekileyo.
Imigaqo nemiGaqo ngokubanzi: le miGaqo nemiGaqo.
Ukusetyenziswa kweeMeko neMeko gabalala
Imigaqo neMiGangqo ngokuBanzi isebenza kuzo zonke izibonelelo, izivumelwano kunye nokuhanjiswa kwe-GBL YaseYurophu BV, ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela ngokubhala.
Ukuba uMthengi ngokomyalelo wakhe, isiqinisekiso okanye naluphi na olunye unxibelelwano olwamkela ukwamkelwa kweMigaqo gabalala kunye neziBonelelo kubandakanya naluphi na ulungiselelo olwahlukileyo, okanye akaqukwanga kwiMigaqo neMibandela ngokuBanzi, loo malungiselelo aya kubopheleleka kuphela nge-GBL yaseYurophu BV ukuba kwaye ukuya kuthi ga ngoku nge-GBL i-BV i-BV ibamkele.
Kwiimeko apho imveliso ethile okanye inkonzo ezinxulumene nemigaqo ethile zisebenza ukongeza kule miGaqobelo kunye neemeko, Umxhasi unokuhlala ebhengeza imeko esebenzayo kakhulu kuye xa imeko ingahambelani
Amaxabiso kunye nolwazi
Onke amaxabiso athunyelwe kwiWebhusayithi nakwezinye izinto ezisuka kwi-GBL yaseYurophu BV zibandakanya irhafu nezinye iirhafu ezimiselwe ngurhulumente, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kwiwebhusayithi.
Ukuba iindleko zokuhambisa ziyahlawuliswa, ziya kuchazwa ngokucacileyo ngexesha elifanelekileyo ngaphambi kokugqitywa kwekhontrakthi. Ezi ndleko ziya kuboniswa ngokwahlukeneyo kwinkqubo yoku-odola.
Umxholo weWebhusayithi uqukiwe ngononophelo olukhulu. I-GBL i-Europe BV ayinako, nangona kunjalo, iqinisekise ukuba yonke ingcaciso kwiWebhusayithi ilungile kwaye iphelele ngamaxesha onke. Onke amaxabiso kunye nolunye ulwazi oluthunyelwe kwiWebhusayithi nakwezinye izinto ezisuka kwi-GBL Europe BV ziphantsi kohlelo kunye nokuchwetheza iimpazamo.
I-BL ye-Europe BV ayinakubekwa tyala lokuphambuka kumbala ovela kumgangatho wemibala eboniswe kwiscreen.
Ukuqukumbela kwesi siVumelwano
Isivumelwano siyakuthathwa ukuba siza kugqitywa ngelo xesha uMthengi amkela ukunikezelwa kwe-GBL Europe BV phantsi kwemeko ezibekwe yi-GBL YaseYurophu BV.
Ukuba uMxhasi ukwamkele ukubonelelwa ngesixhobo se-elektroniki, i-GBL yaseYurophu BV iyakuqinisekisa ukwamkelwa kokunikezelwa kwezinto ngombane ngaphandle kokulibazisa. Kude kuqinisekiswe ukwamkelwa, uMthengi uya kuba nakho ukusiphelisa isivumelwano.
Ukuba kufumaniseke ukuba, ngokwamkela okanye kungenjalo ukungena kwesi siVumelwano, uMthengi unikezele ngeenkcukacha ezingachanekanga, i-GBL yaseYurophu BV iya kuba nelungelo lokuzalisekisa izibophelelo zomthengi kude kufumaneke idatha echanekileyo.
Ukuze usebenzise ngokupheleleyo iwebhusayithi, uMxhasi unokubhalisa ngokusebenzisa ifomu yokubhalisa / indlela yokungena kwiakhawunti kwiWebhusayithi.
Ngexesha lenkqubo yobhaliso, uMxumi uya kucelwa ukuba akhethe igama lomsebenzisi kunye negama eliyimfihlo lokungena kwiWebhusayithi. Umthengi yedwa unoxanduva lokukhetha igama elinegama elaneleyo.
Umthengi kufuneka agcine iziqinisekiso zakhe zokungena, igama lomsebenzisi kunye negama eliyimfihlo ngokungqongqo. I-BL ye-Europe BV ayinakubekwa tyala nakuphi na ukusetyenziswa gwenxa kweziqinisekiso zokungena kwaye ihlala inelungelo lokucinga ukuba uMthengi ongena kwiWebhusayithi yeqela athi lilo. Umthengi unoxanduva kwaye uthwala umngcipheko opheleleyo wazo naziphi na iintshukumo kunye nezinto ezenziweyo zenziwa ngeakhawunti yoMthengi.
Ukuba uMthengi uyazi okanye unesizathu sokukrokrela ukuba iinkcukacha zakhe zokungena sele zifikelele kumaqela angagunyaziswanga, kuya kufuneka itshintshe iphasiwedi yayo ngokukhawuleza kunye / okanye nokwazisa nge-GBL i-Europe BV ngokufanelekileyo ukuze ivumele i-GBL yaseYurophu BV ukuba ithathe amanyathelo afanelekileyo.
Kamsinya nje emva kokuba i-GBL i-Europe BV ifumene iodolo, iya kuthumela iimveliso kuMthengi ngaphandle kokulibazisa kwaye ngokubhekisele kulungiselelo lomhlathi 3 weli nqaku.
I-GBL i-Europe BV igunyazisiwe ukuba ibandakanye amaqela esithathu ekuzalisekiseni izibophelelo zayo phantsi kwesivumelwano.
Ngaphambi komhla wokusayinwa kwesi siVumelwano, ulwazi luya kuthunyelwa kwiWebhusayithi echaza ngokucacileyo indlela eziza kuhanjiswa ngayo iimveliso. Ukuba akukho sithuba sokuhanjiswa sele kuvunyelwene okanye sichaziwe, iimveliso ziya kusiwa ngeentsuku ze-30 kutshanje.
Ukuba i-GBL yaseYurophu BV ayinakho ukuhambisa iimveliso ngaphakathi kwexesha ekuvunyelwene ngalo, iya kwazisa uMthengi ngokufanelekileyo. Kwimeko enjalo uMthengi unokuthatha isigqibo sokuba avumelane nomhla wokuhanjiswa okanye ukucima isiVumelwano ngaphandle kokwenza naziphi na iindleko.
I-GBL i-Europe BV icebisa uMthengi ukuba ahlole iimveliso xa ehambisa kwaye axele nantoni na enesiphene ngexesha elifanelekileyo, ngokubhala okanye nge-imeyile. Ngolwazi oluthe kratya, bona inqaku malunga nesiqinisekiso kunye nokuhambelana.
Umngcipheko onxulumene neemveliso uza kudlulisela kuMthengi kwaoko nje iimveliso zisiwe kwidilesi ekuvunyelwene ngayo.
Ukuba imveliso eyalelweyo ayinakuphinda ibonelelwe, i-GBL yaseYurophu BV inelungelo lokuhambisa imveliso ethelekiswa kwindalo kunye nomgangatho kwimveliso eyalelweyo. Kwimeko enjalo, uMthengi uya kuba nelungelo lokuphelisa isiVumelwano ngaphandle kokudibana naziindleko kunye nokubuyisela imveliso simahla.
Ilungelo lokurhoxa / ukubuya
Umthengi uya kuba nelungelo lokuchithwa kwesivumelwano soMgama kunye ne-GBL yaseYurophu BV ngaphakathi kweentsuku zekhalenda ye-14 emva kokufumana imveliso, simahla ngaphandle kwezizathu. Iqala ngomhla emva kokuba imveliso yamkelwe ngumthengi, okanye umntu wesithathu otyunjwe ngumthengi, ongenguye umntu othengisayo, okanye:
-Ukuhanjiswa kwemveliso kubandakanya ukuhanjiswa okwahlukileyo okanye iinxalenye: usuku apho uMthengi, okanye umntu wesithathu otyunjwe nguMthengi, efumene ukuhanjiswa kokugqibela okanye icandelo lokugqibela;
-Iikontraka zokuhanjiswa rhoqo kweemveliso ngexesha elinikiweyo: usuku apho uMthengi, okanye iqela lesithathu elichongwe nguMthengi, lafumana imveliso yokugqibela;
-Ukuba uMthengi uyalele iimveliso ezininzi: usuku apho uMthengi, okanye iqela lesithathu elichongwe nguMthengi, lafumana imveliso yokugqibela.
Kuphela ziindleko ngqo ezenziweyo kuthumelo olubuyiseleyo kwiakhawunti yoMthengi. Oku kuthetha ukuba uMthengi kuya kufuneka ahlawule iindleko zokubuyisa imveliso. Naziphi na iindleko zokuhambisa ezihlawulwe nguMthengi kunye nexabiso lokuthenga elihlawulelwe imveliso liya kubuyiselwa kuMthengi ukuba iodolo yonke ibuyisiwe.
Ngexesha lokurhoxiswa ekubhekiswe kulo kumhlathi 1 apha ngasentla, uMthengi uya kuyiphatha imveliso kunye nokupakishwa kwayo ngononophelo olupheleleyo. Umthengi akanakuvula ukupakisha okanye asebenzise imveliso ngaphandle kokuba oko kuyimfuneko ukuze kuqinisekiswe uhlobo lweemveliso, imisebenzi yazo kunye nokusebenza kwazo.
Umthengi unoxanduva lokumiswa kwemveliso sisiphumo sokuphatha imveliso ngaphandle kokuba kuvunyelwe.
Umthengi unokusitshitshisa esi siVumelwano ngokungqinelana nomhlathi 1 weli nqaku ngokuchaza ukurhoxiswa (kwidijithali okanye ngenye indlela) kwi-GBL Europe BV, ngaphakathi kwixesha lokurhoxiswa, ngendlela yeemodeli ilungelo lokurhoxa okanye kolunye uqinisekile. indlela. Ukuba i-GBL i-Europe BV yenza ukuba uMthengi abhengeze ukurhoxiswa kwakhe ngeendlela ze-elektroniki / zedijithali, emva kokufumana isibhengezo esinjalo, i-GBL i-Europe BV ithumela kwangoko ukufunyanwa kwayo.
Ngokukhawuleza ngokukhawuleza, kodwa kungabikho emva kweentsuku ze-14 emva komhla wokunikwa kwengxelo njengoko kubhekisiwe kumhlathi 1, uMxhasi uza kuyibuyisela imveliso, okanye ayinike (abamele) i-GBL yaseYurophu BV. Umthengi unokuthumela imveliso ngqo kwi-GBL yaseYurophu BV ngaphandle kwesaziso sokurhoxa kwangethuba ngaphakathi njengoko kuchaziwe kumhlathi 1 Umxhasi kufuneka kule meko, abandakanye isaziso esibhaliweyo sokurhoxa, njengefom emiselweyo.
Iimveliso zingabuyiselwa kule dilesi ilandelayo:
Nayiphi na imali esele ihlawulwe nguMthengi (ngaphambili) iya kubuyiselwa kuMthengi ngokukhawuleza, kwaye nakweyiphi na imeko kwiintsuku ze-14 emva kokupheliswa kwesiVumelwano. Ukuba uMthengi ukhethe indlela ebiza kakhulu yokuhanjiswa kukhetho olusemgangathweni olusisiseko, i-GBL i-Europe BV ayifanelanga ibuyisele iindleko ezongezekileyo zendlela ebiza kakhulu.
Ngaphandle kwakwimeko apho i-GBL i-Europe BV ithembise ukuyibuyisela ngokwakhe le mveliso, inokuhlehlisa ukubuyisela imali de ibe ifumene imveliso okanye de uMxhasi aqinisekise ukuba uyibuyile imveliso, kuxhomekeke ekubeni kwenzeka ntoni ngaphambili.
Ulwazi malunga nokusetyenziswa okanye ukungafakwa kwesicelo selungelo lokurhoxiswa kwaye nayiphi na inkqubo efunekayo iya kuthunyelwa ngokucacileyo kwiWebhusayithi, ngaphambi kokuba kugqitywe ngeMvumelwano.
Umthengi uya kuhlawula izixa-mali kwi-GBL yaseYurophu BV ngokuhambelana nenkqubo yoku-odola kunye naziphi na iindlela zokuhlawula eziboniswe kwiWebhusayithi. I-GBL yaseYurophu BV isimahla ukubonelela ngayo nayiphi na indlela yokuhlawula oyithandayo kwaye inokutshintsha ezi ndlela nangaliphi na ixesha.
Iwaranti kunye nokuthobela
Eli nqaku lisebenza kuphela ukuba uMxhasi akasebenzi ngokwengcali okanye kwezorhwebo. Ukuba, ngaphandle kokubonelelwa kokugqibela, i-GBL i-Europe BV ibonelela ngesiqinisekiso esahlukileyo kwimveliso, oku kusebenza kuzo zonke iintlobo zabathengi.
I-GBL i-Europe BV iqinisekisa ukuba iimveliso zisanelisa isiVumelwano, iinkcazo ezibekwe kwisibonelelo, iimfuno ezifanelekileyo zokucacisa kunye / okanye ukusebenza kunye nemigqaliselo emiselwe kunye / okanye nemigaqo karhulumente esebenzayo ngomhla wokusayinwa kwesi siVumelwano. Ukuba kuvunyelwene ngokuthe ngqo, i-GBL i-Europe BV iyakuqinisekisa ukuba imveliso ilungele ezinye iinjongo ngaphandle kokusetyenziswa kwesiqhelo.
Nasiphi na isiqinisekiso esibonelelwa yi-GBL i-Europe BV, umenzi okanye umthumeli ngaphandle, akuyi kuchaphazela amalungelo asemthethweni kunye namabango lowo uMthengi esele enawo kwaye unokufaka isicelo seMvumelwano.
Ukuba imveliso ezihanjisiweyo isilele ukwanelisa isiVumelwano, uMthengi unokwazisa i-BL ye-Europe BV ngokufanelekileyo ngaphakathi kwexesha elifanelekileyo emva kokufumanisa isiphene.
Ukuba i-GBL i-Europe BV ibona ukuba isikhalazo sisisiseko, iimveliso ezichaphazelekayo ziya kulungiswa, zifakwe endaweni okanye sibuyiselwe imali ngokubonisana noMthengi. Ngokuhambelana neNqaku elimalunga namatyala, ukubuyiselwa kwemali akunakudlula ixabiso elihlawulelwe imveliso nguMthengi.
Inkqubo yokusingatha izikhalazo
Ukuba uMthengi unazo naziphi na izikhalazo ngokunxulumene nemveliso (ngokuhambelana nenqakuwaranti kunye nokuthobela) kunye / okanye ezinye izinto ze-GBL Europe BV inkonzo yakhe, ingangenisa isikhalazo ngomnxeba, nge-imeyile okanye ngeposi. Jonga iinkcukacha zonxibelelwano ngezantsi kwemiGaqo kunye neMibandela.
I-GBL i-Europe BV iya kuphendula kwisikhalazo ngokukhawuleza, kwaye nangayiphi na imeko kwiintsuku ze-1 emva kokuyifumana. Ukuba akukenzeki ukuba i-GBL i-Europe BV yenze indlela yokuphendula kwisikhalazo ngelo xesha, i-GBL i-Europe BV iyakuqinisekisa ukufumana isikhalazo ngaphakathi kweentsuku ze-1 emva kokuyifumana kwaye inike umda wexesha elindele ukuba ukwazi ukunika impendulo ebambekayo okanye eqinisekileyo kwisikhalazo soMthengi.
Eli nqaku lisebenza kuphela ukuba umThengi ngumntu wendalo okanye iqumrhu lezomthetho elisebenza ngobungcali okanye kwezorhwebo.
Uxanduva olupheleleyo lwe-GBL i-Europe BV ngokubhekisele kuMthengi ngenxa yokusilela ukwenza isiVumelwano kunyanzeliswa kwimbuyekezo engekadluli kwixabiso elichaziweyo lesi siVumelwano esithile (kubandakanya i-VAT).
Uxanduva lwe-GBL i-Europe BV ngokubhekiselele kuMthengi kumonakalo ongalunganga okanye ilahleko, ethi kuyo nayiphi na imeko ibandakanyeke-kodwa kungaphelelanga apho- kumonakalo, inzuzo elahlekileyo, imali elahlekileyo, ilahleko yedatha kunye nomonakalo ngenxa yophazamiso kwishishini, ngaphandle.
Ngaphandle kwamatyala ekubhekiswe kuwo kwimihlathana emibini yangaphambili yeli nqaku, i-GBL i-Europe BV ayixhomekeki kulo naliphi na ityala ngokubhekisele kuMthengi womonakalo, ngaphandle komhlaba osekwe kuwo isenzo somonakalo. Izithintelo ezibekiweyo kule Nqaku, ziya kuthi, nangona kunjalo, ziyeke ukwenza isicelo kunye nokulahleka komonakalo okanye ilahleko sisiphumo sesenzo ngabom okanye ukungakhathali okukhulu kwicala le-GBL yaseYurophu BV.
I-GBL i-Europe BV iya kuba noxanduva kuphela kuMthengi ngenxa yokusilela ekufezekisweni kwesivumelwano ukuba uMxhasi ukhupha isaziso esifanelekileyo se-GBL Europe BV ngaphandle kokulibazisa lichaze ixesha elifanelekileyo lokulungisa ukusilela, kunye ne-GBL yeYurophu BV nayo iyaqhubeka nokusilela ukwenza uxanduva lwayo emva kwelo xesha. Isaziso sokungagqibeki kufuneka siqulathe inkcazo yokungaphumeleli ngokweenkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka ukwenzela ukuba i-GBL yeYurophu BV inikeze impendulo eyaneleyo.
Nawuphi na umsitho onikezela ilungelo kwimbuyekezo uhlala uphantsi kwemeko yokuba uMthengi axele ngomonakalo okanye ilahleko ngokubhala kwi-GBL Europe BV ngokukhawuleza, kodwa kungadlulanga xesha lide kwiintsuku ze-30 emva kokuba kwenzekile umonakaliso okanye ilahleko.
Kwimeko yokunyanzeliswa kwe-GBL i-Europe BV ayinaxanduva lokuhlawula imbuyekezo ngawo nawuphi na umonakalo okanye ilahleko uMthengi eye wayifumana njengesiphumo.
Ngexesha uMthengi engekenzi ntlawulo epheleleyo kwisixa esipheleleyo ekuvunyelwene ngaso nge-GBL i-Europe BV iya kugcina ubunini bazo zonke iimpahla ezizisiweyo.
I-GBL i-Europe BV iza kuqhuba iinkcukacha zabathengi ngokweNkcazo eyimfihlo epapashwe kwiWebhusayithi.
Esi sivumelwano silawulwa yimithetho yelizwe yokusekwa kwevenkile yewebhu.
Ngaphakathi njengoko kungachazwanga ngolunye uhlobo ngokomthetho olunyanzelekileyo, nayiphi na imbambano evela kwiSivumelwano iya kungeniswa kwinkundla efanelekileyo yeDatshi kwisithili apho i-GBL Europe BV ineofisi yayo ebhalisiweyo.
Ukuba naluphi na ulungiselelo olubekiweyo kule miGaqo nemiGaqo Jikelele kufuneka ingqineke ilize, oku akuyi kuchaphazela ukuthembeka kweMigaqo Jikelele neMiqathango ngokubanzi. Kwimeko enjalo, amaQela aza kubeka phantsi enye okanye ngaphezulu izibonelelo ezitsha ezizezinye ezizakubonisa ubonelelo lwangempela kangangoko kunokwenzeka phantsi komthetho.
Igama 'elibhalwe phantsi' kule Migaqo nakwiMeko ngokuBanzi likwabhekisa kunxibelelwano nge-imeyile kunye nefeksi, ngokuxhomekeka ekubeni isazisi somthumeli kunye nokunyaniseka komyalezo we-imeyile zisekwe ngokwaneleyo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, izikhalazo okanye izimvo emva kokufunda le miGaqo kunye neMeko, nceda unxibelelane nathi nge-imeyile okanye ngeleta.
Igumbi lezorhwebo: 71008470
UBhALISO ngobhaliso: GM486603-26
! Ayisetyenziswanga kwaye inokuba ibulalayo ukuba iyachithwa